Global Voices teny Malagasy » Ny fiantraika ratsin’ny gripan-kisoa Afrikanina amin’ny krizin’ny famatsiana kisoa ao Shina? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Oktobra 2019 10:19 GMT 1	 · Mpanoratra 越界問答 Nandika (en) i Oiwan Lam, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Sakafo, Voina
Sary avy amin'ny inmediahk.net Image from inmediahk.net
Tohanan'ny Fikambanana tsy miankina any Hong Kong, Culture and Media Education Foundation ity ekipan'ny Fanontaniana sy Valiny Tsy Voasakan-tSisintany ity mba hiresahana momba ireo ahiahy iraisan'ny vondrom-piarahamonina Shinoa avy ao anatiny sy ivelan'i Shina Tanibe. Nosoratana tamin'ny teny shinoa izy ity tany am-boalohany ary navoaka tamina sehatra isan-karazany, ao anatin'izany ny inmediahk.net , matters.news  ary ny tranokalan'ny Global Voices Shinoa. Fandikana tsotsotra tamin'ny endrika shinoa ity manaraka ity.
Tamin'ny volana septambra, herinandro vitsivitsy alohan'ny faha-70 taonan'ny fiorenan'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina, nanomboka namoaka ireo henan-kisoa nampangatsiahana mivaingana avy amin'ny fitehirizana stratejika ny governemanta shinoa mba hamaliana ny filàna henan-kisoa eo amin'ny tsena anatiny. Nitranga izany taorian'ny aretina gripan-kisoa Afrikanina namono kisoa marobe  tao Shina ary nahatonga ny fihenan'ny famatsiana henan-kisoa. Lasa lavitra mihitsy aza ny sasany naneho hevitra  fa hitan'i Beijing ho henjana kokoa ny krizin'ny famatsiana kisoa ankehitriny raha oharina amin'ny fihetsiketsehana Hong Kong sy ny ady ara-barotra Etazonia-Shina.
Nanazava ny halehiben'ny krizy sy ny fidiran'ny politika amin'izany tamin'ny endrika fanontaniana sy valiny ny ekipan'ny Fanontaniana sy Valiny tsy voasakan-tsisintany.
F: Manao ahoana ny halehiben'ny tsenan'ny kisoa any Shina?
A: China’s demand for pork meat  makes up nearly half of the world's total output. For an average Chinese family, pork accounts for two thirds of their meat consumption, and on average, a Chinese person consumes 120 pounds of pork annually. The whole country consumes annually 700 million pig stock annually. China is almost self-sufficient in terms of pork supply. In 2016, imported pork was equal to 4 percent of the country’s domestic consumption. But this figure was equal to 26 percent of the world’s export output.
V: Efa ho antsasaky ny vokatra manerantany ny tinadin'ny henan-kisoa ao  Shina. Ho an'ny fianakaviana Shinoa iray antonony, roatokon'ny fanjifan'izy ireo hena ny henan-kisoa, ary amin'ny ankapobeny, mihinana henan-kisoa 120 kilao isan-taona ny Shinoa iray. Mihinana kisoa 700 tapitrisa isan-taona ny firenena manontolo. Saika mahavita tena i Shina raha resaka famatsiana henan-kisoa. Tamin'ny taona 2016, 4 isanjaton'ny kisoa nafarana no fanjifàna anatiny tao amin'ny firenena. Saingy mitovy amin'ny 26 isanjaton'ny vokatra fanondrana eran'izao tontolo izao io isa io.
F: Ahoana no fomba nielezan'ny gripan-kisoa afrikana (ASF) tany Sina? Fa maninona no niely haingana tao amin'ny firenena manontolo izany?
V: Tsy mbola misy ny fanazavàna ofisialy avy amin'ny manampahefana shinoa momba izany fanontaniana izany. Voasivana vetivety ireo adihevitra antserasera mifandraika amin'izany. Na izany aza, nihevitra i Dirk Pfeiffer, manampahaizana momba ny fahasalaman'ny biby sy ny areti-mifindra fa avy amin'ny kisoa naondrana an-tsokosoko avy any Rosia ny ASF. Tamin'ny volana martsa 2017, nisy valan'aretina tany Irkutsk, Serbia.1000 kilaometatra monja miala an'i Shina ilay tanàna. Matetika miparitaka manerana ny firenena amin'ny alàlan'ny sakafon-kisoa izay ahitana ambin-tsakafo tsy masaka misy otrikaretina ny ASF.
Amin'ny ankapobeny, mora andairan'ny ASF ny toerana kely fompiana kisoa. Tamin'ny taona 2017, toerana kely ny 90 isan-jaton'ny toeram-piompiana kisoa any Shina ary namokatra ny iray ampahatelon'ny famatsiana kisoa ao amin'ny firenena izy ireo. Amin'ny ankamaroan'ny tranga , namelona kisoa amin'ireo ambina sakafon'olombelona tsy lany ireo toerana kely fiompiana kisoa ary tsy nandalo rafitra fanarahamaso areti-mifindra izy ireo.
Na izany aza, ahitana otrikaretina ihany koa ireo toerana lehibe fiompiana kisoa. Angamba noho ny tsy fanarahana ny fenitra fanarahamaso areti-mifindra araka ny nambaran'ny  tatitra fanadihadiana nataon'ny Caixin.
Araka ny tatitra ofisialy, nitranga tamin'ny volana Aogositra 2018 tany Shenyang any avaratra atsinanan'i Shina ny aretina ASF voalohany. Mifanohitra amin'ny firenen-kafa, tsy voafetra amin'ny toerana ara-jeografika fotsiny ny aretina ao Shina fa niparitaka haingana any amin'ny faritany hafa.
Nisy ny tatitra fanadihadiana nataon'ny The Initium izay nahitana ny antony ao ambadiky ny fiparitahan'ny valan'aretina ASF tamin'ny fivarotana kisoa tratran'ny aretina eny an-tsena, ny fanariana kisoa maty sy ny fitaterana ny biby manerana ny faritany..
F: Manao ahoana ny hagoavan'ny aretina gripan-kisoa Afrikanina?
V: Araka ny angon-drakitra ofisialy tamin'ny volana septambra , namono kisoa 100 tapitrisa mahery i Shina tao anatin'ny herintaona. Nidina hatramin'ny iray ampahatelon'ny totalin'ny salanisa ny totalin'ny vokatra henan-kisoa. Saingy tsy maneho ny tena zava-misy io tarehimarika io satria maro ireo mpiompy kisoa madinika tsy namoaka tatitra tany amin'ny tompon'andraikitra ara-pambolena. Raha ny marina, nilaza ny tatitra ofisialy tamin'ny volana Jolay fa kisoa 1,16 tapitrisa ihany no nofongorina. Nohavaozina io tarehimarika io rehefa avy nanambara ny fanjakana foibe fa maika ny famatsiana kisoa. Tombanana ho 200 tapitrisa ireo kisoa voakasika araka ny tombatombana tsy ofisialy.
Nanambara ny Fikambanana Manerantany (Firenena Mikambana) ho an'ny tatitra ara-pahasalaman'ny biby  raha niresaka momba ny ASF fa niparitaka tany amin'ny firenena tsy lavitra ny valan'aretina tany Shina, ka anisan'izany i Vietnam, Kambodza, Hong Kong, Laos, Myanmar, Filipina ary Korea Atsimo.
F: Inona avy ireo fepetra noraisin'i Shina mba hifehezana ny ASF tsy hiparitaka? Mahomby ve izy ireo? Voafehy ve ny valan'aretina amin'izao fotoana?
A: Tsy dia sarotra ho an'ny firenen-kafa ny rafitra fanarahamaso ny areti-mifindra ASF any Shina. Manana tatitra momba ny valan'aretina sy rafitra fanonerana ho an'ny kisoa very izy. Na izany aza, matetika nitaraina ireo mpiompy kisoa fa tsy nahazo fanonerana feno izy ireo ary noho izany dia tsy nandefa tatitra tany amin'ny manampahefana.
Nandràra ny fitaterana kisoa manerana ny faritany ihany koa i Shina nanomboka ny volana Aogositra 2019. Noraràn'ny governemanta sasany eo an-toerana ireo toeram-piompiana kisoa akaikin'ny faritra an-tanàn-dehibe ary nihena ny isan'ny valan'aretina tamin'ny volana jona-Jolay 2019. Na izany aza, raha nanambara ny fanjakana foibe fa mila famatsiana kisoa maika, maro ireo toeram-piompiana kisoa nisokatra indray.
Nanambara ny  Ny Akademia Shinoa momba ny siansan'ny fambolena fa tamin'ny volana septambra 2019, nahitana fandrosoana lehibe teo amin'ny fitadiavana vaksiny. Na izany aza, tsy dia nanantena ireo manam-pahaizana momba ny biby, satria mety hiovaova endrika ilay otrikaretina ao anatin'ny dingana.
Nilaza i Dirk Pfeiffer fa tsy momba ny biby ihany ny  fanarahamaso ny valan'aretin'ny biby, fa momba ny olona ihany koa sy hoe mahafantara momba ny fanarahamaso ny valan'aretina ve ireo mpiompy kisoa sa tsia. Momba ny rafitra ihany koa izany, toy ny hoe rahoviana ny fampitam-baovao no afaka manaramaso tokoa ny manampahefana amin'ny famoahana onitra sy mampahafantatra ny vahoaka momba ny otrikaretina mandritra ny fivoahan'ny valan'aretina voalohany.
F: Nahoana ireo mpanara-baovao sasany any Shina no nilaza fa henjana kokoa ny krizin'ny kisoa raha oharina amin'ny fihetsiketsehana Hong Kong sy ny ady ara-barotra Shina-Etazonia?
A: Tamin'ny volana Aogositra, nisondrotra 46,7 isanjato  ny vidin'ny henan-kisoa eny an-tsena. Efa ho avo roa heny mihitsy aza any amin'ny faritra sasany. Na dia nahavita nifehy ny vidiny aza ny governemanta, dia tsy hahita kisoa eny an-tsena ny olona. Tao amin'ny aterineto, horonantsary marobe no nanesoeso ny fiakaran'ny vidin'ny henan-kisoa ary nanolo ny hetsi-panoherana Hong Kong sy ny ady ara-barotra amerikanina-Shina ho teny be mpikaroka voalohany ao amin'ny media sosialy ny resaka kisoa. Tezitra mafy ny olona tamin'ny fiparitahan'ny fampielezan-kevitra izay nilaza fa mahasalama ny olona ny mampihena ny fihinanana kisoa.
Nandray ny olana momba ny famatsiana kisoa ho toy ny krizy  izay mety hanimba ny fitoniana ara-tsosialy ny praiminisitra lefitra sinoa Hu Chunhua ka noho izany dia nanome baiko ireo governemanta eny an-toerana mba hanampy ireo mpiompy kisoa hanokatra indray ny toeram-piompian'izy ireo. Nanapa-kevitra ihany koa ny governemanta foibe fa hamoaka ireo tahiry stratejika momba ny kisoa mba hahazoana antoka fa tsy latsaky ny 95 isan-jaton'ny salanisan'ny famatsiana mandritra ny faha-70 taona niorenan'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina ny famatsiana kisoa.
Napetraka tamin'ny taona 1970 ny rafitra strategika fitehirizana kisoa mba hitazonana ny vidin'ny hena eo an-toerana mandritra ny fotoan-tsarotra, toy ny loza voajanahary sy ny ady. Manana tahirin-kisoa nampangatsiahina 100 000 taonina eo ho eo i Shina.
Ankoatra izay, nanambara i Shina tamin'ny 13 septambra fa hanaisotra ny saozaha sy ny henan-kisoa ao anatin'ny lisitry ny hetra fanampiny ny firenena. Talohan'izay anefa, tamin'ny 1 septambra, nambaran'i Shina ny fametrahana ny hetra hetra amin'ny henan-kisoa nafarana avy any Etazonia ho hany amin'ny 72 isanjato ary noterena hanafoana ny komandiny ireo Shinoa mpivaro-kena. Satria efa akaiky ny faha-70 taonan'ny PRC, niova hevitra ny fitondrana Shinoa. Satria mamaritra ny zon'olombelona ho zon'ny vahoaka hifaly i Shina, raisina ho zava-dehibe kokoa noho ny fihetsiketsehana Hong Kong ny olana momba ny famatsiana kisoa, izay nisy fiantraikany tamin'ny latabatra fisakafoanan'ny olona .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/31/144089/
 namono kisoa marobe: https://www.cnn.com/2019/10/16/business/african-swine-fever-china-pork-pigs/index.html
 naneho hevitra: https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3026480/hong-kong-protests-and-us-trade-war-no-longer-chinas-top